7 Zvino rusvingo parwakanga rwangopera kuvakwazve,+ ndakabva ndamisa masuo acho.+ Vachengeti vemagedhi+ nevaimbi+ nevaRevhi+ vakabva vagadzwa. 2 Ndakaita kuti Hananai+ hama yangu naHananiya muchinda weNhare+ vatarisire Jerusarema, nokuti iye akanga ari munhu akavimbika kwazvo+ uye aitya+ Mwari wechokwadi kupfuura vamwe vakawanda. 3 Naizvozvo ndakati kwavari: “Magedhi+ eJerusarema ngaarege kuvhurwa kusvikira zuva rapisa; uye pavanenge vakamira pedyo ngavavhare masuo acho vaakiye.+ Misai varindi vevagari vomuJerusarema, mumwe nomumwe panzvimbo yake yokurindira uye mumwe nomumwe pakatarisana neimba yake.”+ 4 Zvino guta racho rakanga rakafara riri guru, uye mukati maro maingova nevanhu vashomanana,+ uye makanga musina dzimba dzakavakwa. 5 Asi Mwari wangu akazviisa mumwoyo mangu+ kuti ndiunganidze vanokudzwa nevatevedzeri vevatongi nevanhu vacho kuti vanyorwe maererano nemadzinza avo.+ Ndakabva ndawana bhuku rakanyorwa madzinza+ evaya vakauya pakutanga, ndikawana makanyorwa kuti: 6 Ava ndivo vanakomana vedunhu racho,+ vakauya vachibva pakutapwa+ kwevanhu vakanga vatapwa, avo Nebhukadhinezari+ mambo weBhabhironi akanga atapa,+ vakazodzoka kuJerusarema nokuJudha, mumwe nomumwe kuguta rake;+ 7 vaya vakauya naZerubhabheri,+ Jeshua,+ Nehemiya, Azariya, Raamiya, Nahamani, Modhekai,+ Bhirishani, Mispereti, Bhigvhai, Nehumi, Bhaana. Kuwanda kwevarume vevanhu vaIsraeri ndouku: 8 Vanakomana vaParoshi,+ zviuru zviviri nezana nemakumi manomwe nevaviri; 9 vanakomana vaShefatiya,+ mazana matatu nemakumi manomwe nevaviri; 10 vanakomana vaAraa,+ mazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri; 11 vanakomana vaPahati-moabhi,+ vevanakomana vaJeshua naJoabhi,+ zviuru zviviri nemazana masere negumi nevasere; 12 vanakomana vaEramu,+ chiuru nemazana maviri nemakumi mashanu nevana; 13 vanakomana vaZatu,+ mazana masere nemakumi mana nevashanu; 14 vanakomana vaZakai,+ mazana manomwe nemakumi matanhatu; 15 vanakomana vaBhinui,+ mazana matanhatu nemakumi mana nevasere; 16 vanakomana vaBhebhai,+ mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere; 17 vanakomana vaAzgadhi,+ zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevaviri; 18 vanakomana vaAdhonikamu,+ mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe; 19 vanakomana vaBhigvhai,+ zviuru zviviri nemakumi matanhatu nevanomwe; 20 vanakomana vaAdhini,+ mazana matanhatu nemakumi mashanu nevashanu; 21 vanakomana vaAteri,+ waHezekiya, makumi mapfumbamwe nevasere; 22 vanakomana vaHashumu,+ mazana matatu nemakumi maviri nevasere; 23 vanakomana vaBhezai,+ mazana matatu nemakumi maviri nevana; 24 vanakomana vaHarifi,+ zana negumi nevaviri; 25 vanakomana vokuGibhiyoni,+ makumi mapfumbamwe nevashanu; 26 varume vokuBhetrehema+ neNetofa,+ zana nemakumi masere nevasere; 27 varume vokuAnatoti,+ zana nemakumi maviri nevasere; 28 varume vokuBheti-azmavheti,+ makumi mana nevaviri; 29 varume vokuKiriyati-jearimu,+ Kefira+ neBheeroti,+ mazana manomwe nemakumi mana nevatatu; 30 varume vokuRama+ neGebha,+ mazana matanhatu nemakumi maviri nomumwe chete; 31 varume vokuMikmasi,+ zana nemakumi maviri nevaviri; 32 varume vokuBheteri+ neAi,+ zana nemakumi maviri nevatatu; 33 varume vokune rimwe Nebho,+ makumi mashanu nevaviri; 34 vanakomana vomumwe Eramu,+ chiuru nemazana maviri nemakumi mashanu nevana; 35 vanakomana vaHarimu,+ mazana matatu nemakumi maviri; 36 vanakomana vokuJeriko,+ mazana matatu nemakumi mana nevashanu; 37 vanakomana vokuRodhi,+ Hadhidhi+ neOno,+ mazana manomwe nemakumi maviri nomumwe chete; 38 vanakomana vokuSenaa,+ zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu. 39 Vapristi vaiva: Vanakomana vaJedhaya+ veimba yaJeshua, vaiva mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatatu; 40 vanakomana vaImeri,+ vaiva chiuru nemakumi mashanu nevaviri; 41 vanakomana vaPashuri,+ vaiva chiuru nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe; 42 vanakomana vaHarimu,+ vaiva chiuru negumi nevanomwe. 43 VaRevhi vaiva: Vanakomana vaJeshua, waKadmieri,+ wevanakomana vaHodhevha,+ vaiva makumi manomwe nevana. 44 Vaimbi,+ vanakomana vaAsafi,+ vaiva zana nemakumi mana nevasere. 45 Vachengeti vemagedhi,+ vanakomana vaSharumu,+ vanakomana vaAteri, vanakomana vaTarimoni,+ vanakomana vaAkubhu,+ vanakomana vaHatita, vanakomana vaShobhai,+ vaiva zana nemakumi matatu nevasere. 46 VaNetinimu vaiva:+ Vanakomana vaZiha, vanakomana vaHasufa, vanakomana vaTabhaoti,+ 47 vanakomana vaKerosi, vanakomana vaSia, vanakomana vaPadhoni,+ 48 vanakomana vaRebhana, vanakomana vaHagabha,+ vanakomana vaSarimai, 49 vanakomana vaHanani,+ vanakomana vaGidheri, vanakomana vaGahari, 50 vanakomana vaReaya,+ vanakomana vaRezini,+ vanakomana vaNekodha, 51 vanakomana vaGazamu, vanakomana vaAza, vanakomana vaPaseya, 52 vanakomana vaBhesai,+ vanakomana vaMeunimu, vanakomana vaNefushesimu,+ 53 vanakomana vaBhakbhuki, vanakomana vaHakufa, vanakomana vaHahuri,+ 54 vanakomana vaBhazriti, vanakomana vaMehidha, vanakomana vaHasha,+ 55 vanakomana vaBhakosi, vanakomana vaSisera, vanakomana vaTema,+ 56 vanakomana vaNeziya, vanakomana vaHatifa.+ 57 Vanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva:+ Vanakomana vaSotai, vanakomana vaSofereti, vanakomana vaPeridha,+ 58 vanakomana vaJaara, vanakomana vaDhakoni, vanakomana vaGidheri,+ 59 vanakomana vaShefatiya, vanakomana vaHatiri, vanakomana vaPokereti-hazebhaimu, vanakomana vaAmone.+ 60 VaNetinimu+ vose nevanakomana vevashandi vaSoromoni vaiva mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri. 61 Ava ndivo vakabva kuTeri-mera, Teri-hasha, Kerubhi, Adhoni neImeri,+ asi vaisakwanisa kutaura imba yemadzibaba avo nokwavakabva, kana vaiva vaIsraeri: 62 vanakomana vaDheraya, vanakomana vaTobhiya, vanakomana vaNekodha,+ vaiva mazana matanhatu nemakumi mana nevaviri. 63 Vevapristi vaiva:+ vanakomana vaHabhaya, vanakomana vaHakozi,+ vanakomana vaBhazirai,+ uyo akatora mudzimai pavanasikana vaBhazirai+ muGiriyedhi akazoshevedzwa nezita ravo. 64 Ava ndivo vaya vakatsvaka bhuku ravo remazita, kuti varatidze dzinza ravo pachena, asi harina kuwanika,+ zvokuti vakarambidzwa kuva vapristi zvichinzi vakasvibiswa.+ 65 Naizvozvo muTishata+ akavataurira kuti vasadya+ zvinhu zvitsvenetsvene kusvikira mupristi ane Urimu+ neTumimu+ amuka. 66 Ungano yose seboka rimwe chete yaiva zviuru makumi mana nezviviri nemazana matatu nemakumi matanhatu,+ 67 tisingabatanidzi varandarume vavo+ nevarandasikana vavo, ava vari zviuru zvinomwe nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe;+ uye vakanga vaine vaimbi vechirume+ nevaimbi vechikadzi+ mazana maviri nemakumi mana nevashanu. 68 Mabhiza avo aiva mazana manomwe nemakumi matatu nematanhatu, manyurusi avo aiva mazana maviri nemakumi mana nemashanu.+ 69 Ngamera dzaiva mazana mana nemakumi matatu neshanu. Mbongoro+ dzaiva zviuru zvitanhatu nemazana manomwe nemakumi maviri.+ 70 Kwaiva nechikamu chevakuru+ vedzimba dzemadzibaba+ vakapa nokuda kwebasa.+ MuTishata+ akaisa papfuma yacho madrakema endarama chiuru, ndiro makumi mashanu, nguo refu+ dzevapristi mazana mashanu nemakumi matatu. 71 Kwaiva nevamwe vevakuru vedzimba dzemadzibaba vakaisa papfuma yacho madrakema endarama zviuru makumi maviri nemamaina esirivha zviuru zviviri nemazana maviri nokuda kwebasa.+ 72 Zvakapiwa nevamwe vanhu vose zvaiva madrakema endarama zviuru makumi maviri nemamaina esirivha zviuru zviviri nenguo refu dzevapristi makumi matanhatu nenomwe. 73 Vapristi+ nevaRevhi nevachengeti vemagedhi nevaimbi+ nevamwe vanhu nevaNetinimu+ nevaIsraeri vose vakagara mumaguta avo.+ Pakasvika mwedzi wechinomwe,+ vanakomana vaIsraeri vakanga vava mumaguta avo.+